editor — Sat, 09/05/2015 - 00:12
"रोशनी" युसुफदिन मियाँ पाल्पालीको चौथो गजलसङ्ग्रह हो । पाल्पालीजीले बहरमा गजल लेख्न रुचाउनुहुन्छ । पाल्पालीजीको जीवनको उत्तरार्ध समयको यो उउटा अनुकरणीय काम हो । उर्हाँ उच्च कद गोरो बदन बेलीमा दृढता र सरलता व्यवहारमा समनता, सौहार्दपूर्ण व्यवहार सामाजिक काममा समर्पित साहित्यिक व्यक्तित्वमा धनी लाग्नुहुन्छ । उहाँको जन्म पाल्पा, तानसेन वडा नं १३, पश्चिम गाउँमा वि.सं २००३ साल बैशाख १२ गते भएको थियो । पिता मरहूम अब्दुल गफूर मियाँ र माता मरहूम बिबीरन मियाँको सुपुत्र हुनुहुन्छ ।
editor — Sat, 08/08/2015 - 21:30
पर्वत साहित्य सङ्गमले मोफसलमा भएर पनि नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको गौरवमय इतिहासलाई केलाउँदा अहिले १७ वर्ष चलिरहेको देखिन्छ । साहित्यिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका साहित्यकारहरूलाई यस संस्थाले कालीको सुसेली मार्फत आवरण पृष्ठमा तस्विरलाई सजाएर होस् या साहित्यकार विशेष अङ्क निकालेर होस् तथा कृति विमोचन कृति प्रकाशन, अक्षरयात्रा जस्ता महत्वपूर्ण कार्यको साथै साहित्यक कार्यक्रममा सम्मान / अभिनन्दन गर्दै स्रष्टालाई उच्चकदर गर्दै आएको यथार्थतालाई अनुकरणीय रूपमा लिनु पर्छ । मोफसलमा रहेर एउटा स्तरीय पत्रिका निरन्तर निकालिरहनु चानचुन कुरा होइन र यस्तो गहन कार्यको लागि निरन्तर लागिरहनुहुने सम्पादक इन्द्रकुमार विकल्प सह–सम्पादक इन्द्रमान खत्री/राजेन्द्र पहाडी/डी.आर. शर्मा लगायत सम्पूर्ण पत्रिका परिबार धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
editor — Tue, 08/04/2015 - 04:55
युसुफदिन मियाँ ‘पाल्पाली’को यस गजलसङ्ग्रहलाई मैले पल्लव साहित्य प्रतिष्ठानको बार्षिक कार्यक्रममा विमोचन हुँदा प्राप्त गरेको थिएँ तर पढ्ने काम भए पनि यस सम्बन्धमा समालोचना गर्ने काम भने भएको थिएन । आज ममा पाल्पालीजीका सबै कृतिहरूलाई पढ्ने र विवेचना गर्ने विचार पलाएको छ । बास्तवमा उहाँसँग मेरो परिचय सोही कार्यक्रममा भएको थियो । झट्ट हेर्दा, आकर्षक शाँरीरिक संरचना,सरल व्यक्तित्व, सहयोगी भावनामा उच्च, बोलीबचनमा मीठास र दृढता, व्यवहारमा समतामुखी भावना भएको एक सामाजिक, गीतकार र गजलकारको रूपमा, देखिनुहुन्छ उहाँ ।
editor — Sun, 06/21/2015 - 21:36
युसुफदिन मियाँ ‘पाल्पाली’सँगको मेरो परिचय साहित्यिक कार्यकर्ममा भएको हो । उहाँ व्यक्तित्वमा सरल, भावनामा उच्च, बोलीमा दृढ, व्यवहारमा समनताको रूपमा देखिनुहुन्छ । उहाँ एक सामाजिक साहित्यिक व्यक्ति पनि हो । उहाँसँग पल्लव साहित्य प्रतिष्ठान र चितवनमा आयोजना गरेका हरेक कार्यकर्ममा भेट हुन्छ । यो कृति पनि २०६८ सालमा पल्लव साहित्य प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विमोचन भएको र सोही अवसरमा प्राप्त भएको हो । यो कृतिलाई पढ्न त पढें तर यसबारे आफ्नो धारणा राख्ने प्रयास भने गरेको थिइन । आज उहाँको कृति र उहाँप्रति सङक्षिप्तरूपमा केही लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
editor — Fri, 06/19/2015 - 03:48
२०३६ साल असार महिना २९ गतेको दिन मेघालय, सिलोङ् भारतमा जन्म भै भरतपुर–४, पशुपतिमार्ग नारायण गढ, चितवनमा स्थायी बसोबास गर्ने बुबा प्रेमचन्द्र देवकोटा र माता पूर्णकला देवकोटाकी सुपुत्री, लेखन कला र गायन गलाकी धनी स्रष्टा हुन्, विष्णु तिवारी‘उषा’ (देवकोटा) । विष्णु तिवारी उषा साहित्यिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम स्थापित गरिसकेकी गजलकार हुन् ।
विकृत राजनीतिलाई झापड : ‘सीमान्त विचलन’ उपन्यासबाट
editor — Fri, 06/19/2015 - 02:49
आजपर्यन्त उपलब्ध भएका नेपाली उपन्यासको गति र प्रगतिलाई सूक्ष्मरूपले सिँहावलोकन गरेको खण्डमा नेपाली साहित्यमा आख्यान विधाको परम्परा निकै लामो भैसकेको छ । उपन्यासकार शक्तिवल्लभ अर्यालको महाभारत विराटपर्वदेखि वर्तमान समयमा प्राप्तभएका थुप्रै नेपाली शैली, ढप, बान्की, विषयवस्तु र प्रयोगोन्मुख उपन्यासमा अनेकानेक प्रवृत्ति र प्रतिभाहरूको लामलस्कर नै लागेको छ । आजको नेपाली उपन्यासलाई यस पृष्ठभूमिमा लेराउन विभिन्न कालखण्डका कलमविरहरूको अनेकौं बुद्धितत्व र लगनले उत्साहपूर्वक काम गरेको छ भनेर हामी सहजै भन्न सक्ने अवस्थामा छौं ।
रित्तिएको गाउँको संक्षिप्त विवेचना
editor — Sun, 06/07/2015 - 04:18
आकाँक्षाको चिता नाटक (२०६९)का नाटककार माधव फोख्रेलजी आज हाम्रो अघि कवि भएर देखा परेका छन् । उनको यो दोस्रो कृति समीक्षाको लागि मेरो हातमा परेको छ । माधवजीसँग मेरो दोस्रो पटकको साक्षात्कार हो । तनमुना ६ जिल्ला सुनसरीमा स्थायी बसोबास गर्ने माधवजी, हाल हेटौडा–४, मकवानपुरमा बस्दै आउनु भएको छ । उहाँ एक सरल तथा साधरण व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ । समयलाई पहिचान गर्दै, सरल र सहज भाषामा लेख्न सक्ने उनको कला हो । माधवजीको कविता लेखन शैली समाजको गतिलाई र परिवर्तनको मार्ग पहिल्याएर सत्यतथ्यको आधारमा सजीव चित्रण गर्न सिपालु छन् भन्ने प्रमाण, उहाँको यो रित्तिएको गाउँ कवितासङ्ग्रहले सुचना प्रवाह गरेको छ ।
editor — Mon, 06/01/2015 - 04:35
अमेरिकामा एकताका १६ पेजको कमन सेन्स नामक किताबले देशै हल्लाएको थियो । त्यही किताबका कारण अमेरिकीहरू बेलायतीहरूको उपनिवेशबाट सदासदाका लागि मुक्त भएका थिए । कुन चिज कतिखेर हिट हुन्छ ? अनि कुन चिज कतिखेर फ्लप हुन्छ ? त्यो यो संसारमा कसैले जान्दैन । भनिन्छ नि –वैद्यका छोराछोरी गलगाँड । अनि ज्योतिषीकी छोरी राँडी (?) हुन्छे भनेर ।
मलाई याद् आउँछ –राजा वीरेन्द्रको पारिवारिक रूपमै कत्लेयाम हुँदा शोकको बजारलाई क्यास गर्ने गरी लेखिएको कृष्ण अविरलको रक्तवीज नामक रिपोर्टपरक उपन्यास नेपाली उपन्यासका पाठकमाझमा भाइरल भएको थियो । त्यो पुस्तक बेचेरै उनले त्यसताका कपनमा घर किने रे भन्ने सुनिएको हो । यथार्थ के हो ? त्यो रामजाने ।
बाल सुसेली नियाल्दा
editor — Sat, 05/23/2015 - 16:47
पिता रामचन्द्र कोइराला र माता शकुन्तला कोइरालाको सुपुत्र श्रीकान्त कोइरालाको जन्म गीतानगर गा.वि.स.–७मा २०२६साल असोज १० गते भए पनि हाल उहाँ गीतानगर गा.वि.स.–९ पारसनगर चितवनमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ । उहाँ पेशाले अध्यापन गर्नुहुन्छ । उहाँ २०५१सालबाट साहित्यलेखन आरम्भ गर्नुभएको थियो । उहाँले आज बालकविता लेखेर बालकवि बन्न सफल हुनु भएको छ । एउटा शिक्षकले बालकविता लेख्नु निश्चय नै सकरात्मक काम हो किनकि एउटा सफल शिक्षकले बालबालिको मनोभावलाई बुझेर पढाउँन सक्छ र बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल,बन्न जान्छ ।
अक्षरहरूको पिरामिडको सङ्क्षिप्त विवेचना
editor — Fri, 05/01/2015 - 03:20
हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठानले अक्षरहरूको पिरामिड संयुक्त गजलसङ्ग्रह लिएर हाम्रो अघि खडाभएको छ । यो कृतिले चौधैअञ्चलका केही गजलकारहरूका गजललाई समेट्ने प्रयास गरेको छ र १२५ जना गजलकारका गजलहरू यसमा समावेस गरिएको पाइन्छ । गजलकार पुष्प अधिकारी अञ्जलिले यो एउटा गहन कामको थालनी गरेर गजल आकाशमा आफ्नो नामको साथै चितवनलाई प्रकाशमय बनाएका छन् । देशभरका युवायुवतीहरूलाई हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठानको आगनमा गजलका सुन्दर शेरहरू सहित उपस्थित गराउने उनको काम निकै प्रशंसनीय छ । पुष्पजीले देशभित्रका मात्र नभएर विदेशमा भएका नेपाली युवायुवतीहरूका गजलहरूलाई संकलन सम्पादन र प्रकाशन गरेर गजल क्षेत्रलाई निकै सहयोग पुर्याउनु भएको छ ।
पढ्नै पर्ने बहुआयामिक कृति ‘बौलाही आमा र सुनौला मुस्कानहरू’
editor — Fri, 05/01/2015 - 02:36
नेपाली कथा साहित्यमा पछिल्लो समयमा कृष्णश्री राईले कथा सङ्ग्रहका रूपमा ‘बौलाही आमा र सुनौला मुस्कानहरू’ बजारमा ल्याएका छन् । दुर्गम पहाडी जिल्ला खोटाङ अनि शिक्षण कार्यसँग सम्बद्ध रहेर कृष्णश्रीले समाजको वास्तविकतालाई खोतल्ने प्रयास यस कथा सङ्ग्रहमार्फत् गरेको देखिन्छ । ‘बौलाही आमा र सुनौला मुस्कानहरू’ कथा सङ्ग्रह वर्तमानको सम्बोधन हो, भूतलाई चिहाएर युगलाई बदल्ने मोफसलको गतिलो झापड ।
editor — Thu, 04/16/2015 - 02:52
पद्यका कविता, गीत, गजलभन्दा गद्याख्यान विधाका कथा र उपन्यासको बोलवाला चलिरहेको वर्तमान साहित्यिक सन्दर्भमा पाठकीय माग बमोजिम नै लेखकहरू कथा सिर्जनामा आकृष्ट भइरहेछन् । कविता भन्नासाथ नाक खुम्च्याउने प्रकाशकहरू पनि कथाका किताबहरू भने टपक्कै टिपेर थपक्कै छापिरहेछन् । उपभोक्तावादी, व्यवसायिक दृष्टिले बजार भएरै लेखक र प्रकाशक कथातिर यसरी एकोहोरिएका होलान् ! नेपाली कथा प्रकाशनको क्रममा अर्को कथासङ्ग्रह थपिएको छ —सुलोचना । बेलवारी—४, मोरङका कथाशिल्पी केशु विरहीको ‘सुलोचना’ भित्र जम्मा १५ थान कथाहरू सङ्गृहित छन् ।
editor — Sun, 04/12/2015 - 21:17
editor — Sun, 03/22/2015 - 17:03
केही महिना अघि बुटवलमा भएको एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा बहिनी कृष्णादेवी शर्मा श्रेष्ठले प्लाष्टिक कागजले बेरिएको मोटो मोटो पुस्तक मेरो हातमा दिंदै भनिन् – दाजु ! यो तपाईंलाई । आफ्नो हातमा लिएर प्लाष्टिक खोलेर पुस्तक हेरें । स्वयं कवयित्री कृष्णादेवी शर्मा श्रेष्ठद्वारा लिखित क्रान्तिकारी विश्वेश्वर महाकाव्य रहेछ । नेपालको हर क्षेत्रमा विशेष गरेर राजनीतिक र साहित्यिक क्षेत्रमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नचिन्ने मान्छे विरलै होलान । यस्ता महान व्यक्तित्वलाई नायक बनाएर लेखिएको क्रान्तिकारी विश्वेश्वर महाकाव्य पाएर म मख्ख परें । तर जब मैले महाकाव्यको आकर्षक मुखपृष्ट पल्टाएँ । अर्को पानामा लेखिएको थियो – दाजु ! समीक्षार्थ समर्पित । म झसङ्ग भएँ । साहित्यमा रूचि राख्ने म त एक सामान्य पाठक पो हुँ । समीक्षक त हैन । तर मैले मनमनै भने बहिनीले स्नेहसाथ समीक्षार्थ भने पनि पाठकीय टिप्पणी चाहि पक्कै लेख्छु । त्यही अठोट अनुसार महाकाव्य पढें ।